मारवाडी प्रिमियर लिग : लिगको अन्तिम खेल र फाइनल खेल भोलि हुने
इटहरीमा युवतीमाथि बलात्कारपछि लुटपाट, अर्की महिला भेट्न जाँदै गर्दा पक्राउ परे आरोपी
दिनभरिका खबर फटाफट – १४ फाल्गुन , २०७७
पल शाहले माफी मागेपछि मिलापत्र
यही सरकारले मुलुकलाई सही दिशा दिन्छ : सञ्चारमन्त्री गुरुङ
इलाका प्रहरी कार्यालय धरानमा हाजिर भए पल शाह
विराटनगरमा साढे तीन वर्षमा ६ प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत
कृति सार्वजनिक गर्न स्रष्टा काठमाडौँदेखि विराटनगरसम्म
‘बिहे पास’को अडिसन सम्पन्न
दिनको ४४ सय पाइला हिँडे पनि आयु बढ्ने
मुख्य पृष्ठसमाचार स्वास्थ्यनेपालमा आपतकालीन प्रयोगको अनुमति पाएको कोभिड खोप पहिला यी व्यक्तिलाई
विराटनगर/अहिलेसम्म नेपाल सरकारले भारतको सेरम इन्स्टिच्युटले उत्पादन गरेको खोपलाई आपतकालीन प्रयोगको अनुमति दिएको छ ।
यससँगै नेपालमा अक्सफोर्ड विश्वविद्यालय तथा एस्ट्राजेनेकाले विकास गरेको कोभिशिल्ड खोप ल्याउने बाटो खुला भएको हो । आपतकालीन प्रयोगका लागि अनुमति प्रदान गरिएको कोभिडविरुद्धको खोप उपलब्ध भएको दुईदेखि तीन सातामा खोप अभियान आरम्भ गर्न सकिने विज्ञ समितिका संयोजक डा. श्यामराज उप्रेतीले बताएका छन् ।
नेपालले देशको कुल जनसङ्ख्याको २० प्रतिशत अर्थात् ६० लाख जनालाई पुग्ने गरी खोप किन्ने इच्छा व्यक्त गरेको छ । त्यसका नेपाली पक्षले सहोगको अपेक्षा गर्दै भारत सरकारलाई औपचारिक अनुरोध गरिसकेको छ । खोपविज्ञ उप्रेतीले खोप प्राप्त हुने परिमाणका आधारमा पहिलो चरणमा स्वास्थ्यकर्मी र अस्पतालमा कार्यरत व्यक्तिलाई खोप दिइने र त्यसपछि प्राथमिकताका आधारमा खोप वितरण हुने बताए ।
उनका अनुसार थोरै खोप पाएमा स्वास्थ्यकर्मीलाई मात्रै दिइने छ । अलि बढी पाएमा महिला स्वयम्सेवी र सुरक्षाकर्मीलाई पनि खोप प्रदान गरिने छ । त्यसपछि ७५ वर्षभन्दा माथिका वृद्धमा र खोपको मात्रा पुगेको खण्डमा ५५ वर्षभन्दा माथिकोलाई पनि खोप वितरण गरिने छ । त्यही भएर खोप प्राप्त हुने परिणामको आधारमा निर्णय हुने उनको भनाइ छ ।
अहिलेसम्म १८ वर्षभन्दा मुनिका व्यक्तिलाई कोभिशिल्ड खोप नदिइएको हुनाले नेपालमा पनि त्यसै गरिने डा. उप्रेतीले जानकारी दिएका छन् । त्यसबाहेक गर्भवती महिला र स्तनपान गराइरहेका महिलाहरूलाई उक्त खोपको प्रभावकारिताबारे भइरहेका वैज्ञानिक अध्ययनको थप निष्कर्ष नआएसम्म खोप दिइनै छैन ।
कोभिडविरुद्धको खोप अभियान सञ्चालनको तयारीका लागि मङ्गलबारदेखि राजधानीमा प्रशिक्षण कार्यक्रम सुरु हुने भएको छ । खोप सुरक्षित रूपमा राख्न सबै प्रदेश र केन्द्रमा एउटा गरी कुल आठवटा भण्डारण केन्द्र निर्माणको जिम्मेवारी नेपाली सेनाले पाएको छ । बाल स्वास्थ्य तथा खोप शाखाका प्रमुख डा. झलक गौतमका अनुसार सरकारी खोप अभियानअन्तर्गत अहिले देशभरि खोप लगाइदिने सीप भएका झन्डै आठ हजार जनाको जनशक्ति छ ।